#1 Extension Hair Hair Extensions Clip-Ins: Yithenga i-Kinky Hairly Hair
Ulungiso lweeKinky Curly Hair Extensions Kwabesetyhini beMbala
Ndiyakwamkela kwiIzandiso zangezinwele zendalo, zonke iifowuni, i-clip ye-clip kunye ne-wigs zenzelwe ukusetyenziswa kwexesha elide ngelixa zigcina ubunzima obukhulu ukuqinisekisa ukuzaliseka. Emva kweminyaka elishumi yokunikezela ngokugqithiseleyo kwabesifazane abanemibala, kuba ngumsebenzi wethu wokubandakanya ukuzithengisa ngaphandle kokunciphisa ubukhulu bentlungu nganye.
UMNHE ukhulule amawaka ezinwebelelo zeenwele zendalo kubasetyhini emhlabeni wonke, ukuba bavumelana ngokubambisana nezinto ezimbini. Bafuna iinqununu eziphezulu kunye nenkonzo yamakhasimende aphakamileyo avela kwinkampani ewasekelayo kwizigaba zabo zokukhula. Senza uhlobo lwe 3 kunye udidi lweenwele ze-4 imibala.
Ikhwalithi ephezulu ye-Natural Hair Clip-In Extensions
Kukho iindlela ezininzi onokukubulala kwaye unikeze ukuhlaziywa okufunekayo ekujongeni kwakho kunye neenwele zendalo. Ukufaka iziqeshana zethu ezinempilo, ngokukhawuleza unokuxelela ukuba uthatha njani izicatshulwa zekhwalithi, zonke iziqeshana zethu zifanelana kakuhle neenwele zekinky curly. Ezi zinto ziqiniseke ukuba zikushiye uzive uzimangalisa njengoko zongeza umthamo othandekayo kwi-litty yakho. Sinovuyo ukuqala uhambo lwakho; zonke iingqungquthela zethu zichukumisa ngqondweni yakho! Ngaloo ndlela nikela iimveliso ngeendlela ezahlukeneyo kunye neembonakalo ezigqibeleleyo kuwe. Qiniseka ukuba ujoyine iklabhu yeVIP ukuze ufunde malunga nezinto zethu ezintsha kunye nokuhlaziywa.
I-Kinky Hair yokuqala
yethu afro kinky izinwele ngaba bafazi bombala. Uluhlu luhlobo olunamandla nolunzima oluluhlu lwe-4. Iimfumba zethu kunye ne-clip-ins, i-wigs kunye nokuvalwa zizele kwaye ziqiniseke ukuba ziyakubangalisa.
Ininzi yaseMerika yaseMelika esebenzisa i-kinky textures yethu ukudibanisa kwiindawo ezikhoyo. Le nkqubo yokufaka iimfumba zethu ikhululekile kwaye iphelele kuzo zonke izihlandlo. Imveliso yethu ayikho kuphela yekhwalithi ye-premium ehlala ihlala ixesha elide, kodwa siye saba nabaxhasi bethu kwi-Instagram ixelela ukuba banemithwalo yabo emithandathu iminyaka. Sisebenzise umphathi wethu, okwenene, ukufezekisa oku.
Abathengi bethu bathethe kuthi bafumene kulula ukukhuphula iinwele zabo zendalo usebenzisa izandiso. Uhambo lokuqinisa iinwele zakho kunye nokukhangeleka okukhulu kunenkqubo. Yingakho apha apha ngo-MNN yethu injongo ekuncedeni abathengi bethu bakhangele kwaye bazive behle.
Siyazi ukuba sisitokisini esihle kakhulu kwihlabathi ngenxa yokuba abathengi bethu bayalawula kwihlabathi lonke. Nomaphi apho intombazana enqwenela ukuba ikhwekhwe yakhe igqitywe ngeengqungquthela ezikhazimulayo ezibukeka zendalo kwaye ziyamangalisa, unokuqiniseka ukuba uye wasebenzisa imveliso esiyiyo. Ingummeli ophezulu kakhulu ophezulu izinwele zekinky ezibukiweyo kunye nabathengi ngekhompyutha.
Kuya kubonakala ngathi iinwele zakho zininzi iingqungquthela ezijikeleza ebusweni bakho xa usebenzisa i-curly-in extensions extensions. Ziza kubude obude nobugcisa kunye.
Ukuthenga i-clip-ins eyenzela ukuba ukuxuba iinwele zemvelo kunye nezandiso kwenza isitayela sakho sigcwalise kwaye sihlaziywe konke kanye. Sinikeza ukuzaliswa okupheleleyo kwazo zonke iimpawu, ubude, kunye neentlobo onokuzifunayo. Ukusebenzisa i-clip-ins ukufihla isigaba esakhulayo sokunqunyulwa, okanye isigaba esichukumisayo sokuguquka ukusuka kwiinwele ezilungele ukukhula kwendalo senziwa lula kakhulu. Iimpawu zezinwele zendalo zivumela ukuba iinwele zibe lula ukutyikitya ngeendlela ezahlukeneyo. I-Ponytails, i-up-dos, kunye ne-braids nazo zixhaphazelwe kwiwebhusayithi. I-Clip-ins yindlela epheleleyo yokutshintsha i-hairstyle yakho ngaphandle kokubhubhisa imeko enhle yeenwele zakho zangempela. Ukugcina i-kinky curly yakho Iintombi ezinyulu zentloko zentombi ukutsala okanye ukulungelelanisa imihla ngemihla ukuze ukhangele ukufunwa kungabangela ukulahlekelwa yintlungu okanye umonakalo. Xa usebenzisa iziqwenga ezikhawulezayo, ungabonakala umangalisa kwaye ukhusele iindawo zakho kwiindawo zokugqoka kunye neengqumbo zemihla ngemihla ezingabangela ukuba zenzeke.
Siya Kuzo zonke iiNwele zeNwele ezimnyama
Ngoko ukuba unayo i-4A, i-4B, i-4C ngoko sikugubungile. Siyaqonda ubuninzi bezinto eziyinkimbinkimbi ukuba sibe nomlenze okhangeleka kakhulu, cinga ukuba uhlolisise imifanekiso yethu, ngoko yibona oku kuhambelana nawe ngokugqibeleleyo. UMNYE ngu-100% ongu-black and owned by brand inthanethi okwangoku iinkonzo zabaxhasi kumazwe angama-100 emhlabeni jikelele kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe.
Kuye kugxininiso lukaMENZI ukwenza abafazi bombala babonakale bephawulekayo ngeempahla ezivela kwi-10 ", 12" 14 ", 16", 18 "20" 22 ", 24" 26 "28" 30 "elula isitayela. Ladies bathi baye bafumanisa ukuba iimveliso zethu ziyimfuneko yokuba babulale! Khangela olu hlobo olutsha lwe-weft classic, "Inyaniso malunga neenwele eziluhlaza. "
@jastanae 😍😍😍 ubuhle igama lakhe !!! ·
Ukuzama ukufana nalo lonke ihlobo '19 LOL 😝 ...
I-Divas kunye ne-gents ziyeka ukufa kweenwele zakho. Mkele ...
Namaxesha onke iLOL. Ndiza kufuneka ndiphume ngaphandle ...
https // amashishini angamaxtensions.com
I-Yall sisondele kwisiqingatha se-2019. Khumbula ...
Ziziphi iingcinga zakho? Ingaba oku kuchanileyo okanye umhlathi?
Ngaba bayabenza njengaye?
Joyina IQela leVIP kwi-#mynaturalhairextensions Ku ...